I-China Aluminium Wall Panels Umkhiqizi Wangaphakathi kanye Nomthengisi | URuiyi
Iphaneli elihlanganayo le-Acp aluminium ingubumba omkhulu we-aluminium wokwakha. Njengohlobo olusha lwamaphaneli we-aluminium wezakhiwo, intengo yeshidi le-aluminium liphansi uma kuqhathaniswa, imibala yephaneli ehlanganisiwe ye-aluminium yehlukile, futhi le nto inokusetshenzwa okuhle kakhulu. Okubaluleke kakhulu, ibhodi elihlanganisiwe le-aluminium linokumelana nomlilo okuhle kakhulu kanye nekhwalithi ephezulu.
Ngaphezu kwalokho, kukhona nezinhlobonhlobo zamapaneli e-aluminium athengiswayo emakethe.
Isendlalelo sangaphakathi nesangaphandle se-aluminium esiyinhlanganisela yephaneli yokumbozwa yishidi le-aluminium eli-0.5mm elihlanzekile (ukusetshenziswa kwendlu ngu-0.2-0.25mm) kanti ungqimba oluphakathi luyi-3 ~ 4mm polyethylene (PE noma i-PVC). Ukufakwa kwe-aluminium okuyinhlanganisela kunezinzuzo eziningi. Iphaneli ye-aluminium eyinhlanganisela ilula, okwamanje, inendawo ebushelelezi nokuthamba okuhle. Ngaphezu kwalokho, leli phaneli elihlanganisiwe le-acp aluminium linokucutshungulwa okuhle kakhulu kwesiza. Ngokwesisekelo salezi zakhiwo zephaneli ehlanganisiwe ye-aluminium, amapaneli e-aluminium adayiswa ku-RUIYI Aluminium azoba ngcono kakhulu kwikhwalithi yomkhiqizo.
Ukufakwa indlela odongeni aluminium esiyinhlanganisela panel
1. Izinga eliyisisekelo le-du leveling: ukulinganisa isisekelo sodonga sokuqala
2. Faka ikhebhe lamapulangwe: gcwalisa udonga bese ulilungisa ngamathoshi okhuni, imvamisa kungama-20 * 30 okhiye bokhuni, kunesikhala @ 400,400 noma @ 600,600 (ilambu lensimbi ekhanyayo nalo liyatholakala (ukhiye wokhuni udinga ukupendwa ngopende ongenamlilo)
3. Faka i-base board: ibhodi enezingqimba eziningi, ibhodi lebhulokhi elilungiswe ngekhele yokhuni noma insimbi ekhanyayo yensimbi (ibhodi lesisekelo sokhuni kumele lipendwe ngopende ongangenamlilo)
4. Faka iphaneli ye-aluminium-plastic: masinyane thola iglue ukugqoka emuva kwephaneli ye-aluminium-plastic (indawo yokufaka) bese ulinda imizuzu eyi-10-15, khona-ke ungalayisha ibhodi.
Indlela yobuso obuphezulu iyafana, kepha indlela yokulungisa i-keel yehluke kancane, futhi ipuleti lesisekelo akufanele libe likhulu kakhulu ngangokunokwenzeka, kubhekwa inkinga yesisindo sakho!
Langaphambilini Imininingwane ye-Aluminium Panel
Olandelayo: Umhlinzeki we-China Good Quality Aluminium Alloy Plate
Imininingwane ye-Aluminium Panel